Angôla - Wikipedia
(tonga teto avy amin'ny Angola)
Devise nationale : «Virtus Unita Fortior - Ny firaisana no hery»
Fiteny portogezy, bantu, koishan
Finoana katolika ; vitsy an'isa ny animista sy protestanta
Praiminisitra Bornito de Sousa
Filoham-pirenena João Lourenço
Velarantany 1.246.700 km²
- Manontolo (2014)
Fahaleovantena 11 Novambra 1975
Hiram-pirenena Angola Avante
Faritra ora UTC +1
Faritra Internet .ao
Antso an-tariby 244
I Angôla dia firenena ao Afrika Afovoany, manana morontsiraka ao amin' ny Ranomasimbe Atlantika, manana velaran-tany mirefy 1 246 700 km². I Luanda no renivohiny. Ny Repoblika Demôkratikan' i Kôngô no mamaritra azy ao avaratra, ny Repoblikan' i Kôngô sy i Zambia no ao atsinanana ary i Namibia no ao atsimo. Any andrefana kosa ny Ranomasimbe Atlantika.
Ny ampahany be amin' ny tanin' i Angôla dia lembalemba midadasika izay midina miatsinanana sy miankandrefana mankany amorontsiraka. Ny tany lemaka amorontsiraka dia mifanohy amin' ny tany efitra. Betsaka ny ony sy ny renirano ahitana rian-drano lehibe.
Toetanin-jana-pehin-tany ny toetanin' i Angôla. Isan-karazany ny zavamaniry any, izay mamorona ala na hivoka anirian-kazo na tany midadasika anirian' ahitra. Maro karazana koa ny biby hita any, ka isan' izany ny elefanta sy ny jirafa aty ny tokantandroka. Betsaka koa ny karazam-borona.
Ahitana vondrom-poko maro ny ao Angôla, ny amaro anisa amin' izany dia ny Bakôngô, ny Ambondo, ny Ôvimbondo, ny Londa. Kristiana ny antsasa-manilan' ny mponina fa ny sisa kosa dia manaraka ny finoan-drazana afrikana.
Zanatany pôrtogey i Angôla hatramin' ny taona 1975 nahazoany ny fahaleovan-tenany. Ny fiteny pôrtogey no fiteny ôfisialy any.
Fiteny ao Angôla
I Wikimedia Commons dia manana aino aman-jery mikasika an'i : Angola
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Angôla&oldid=1037906"
Dernière modification le 15 Septambra 2021, à 14:06
Voaova farany tamin'ny 15 Septambra 2021 amin'ny 14:06 ity pejy ity.